Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0112 lah
Lesona 01 : Ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy
29 Sept - 05 Okt 2012
Ireo mpandray anjara ao anatiny
Alahady 30 Sept.
Manerana ny tantara rehetra voarakitra hatramin’izay no efa nahatsapan’ny olona fa tafiditra ao anatina karazana tolona na ady ifanaovan’ny hery anankiroa ny taranak’olombelona. Izao no nosoratan’i T.S. Eliot, mpanoratra tononkalo: “Zavatra iray no tsy niova nandritra ireo taona rehetra niainako./ Na hovainao endrika aza io zavatra io, dia mbola tsy miova ihany:/ Tsy inona izany fa ny tolona tsy misy fihafarana eo amin’ny Tsara sy ny Ratsy.” - CPP, t. 98. Na dia tsy mahagaga intsony aza izany fahatakarana izany, dia samy hafa tanteraka ny fomba fijerin’ny olona ny momba io fifanandrinana io, ny hoe iza avy no tafiditra ao anatiny, iza no tandindomin-doza ary ahoana no fomba hifaranany. Amin’ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika anefa na izany aza, dia misy idirany tanteraka amin’ny hery ankoatra ny an’olombelona ny fiheverantsika io ady io. Noho ny fahatakarantsika ny Baiboly sy ny fomba fanehoany ilay antsointsika hoe “ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana” no ananantsika izany fomba fijery izany.
Diniho ny Gen. 3:15 sy ny Apôk. 12:1-17. Iza avy ireo mpandray anjara fototra ao anatin’ny fifanandrinana voalaza? Indraindray ny tandindona dia entina anehoana ny mpandray anjara. Nahoana anefa no inoantsika fa tena misy tokoa ary zava-manana aina ara-bakiteny mihitsy ireo hery voalaza eto ireo? Inona no hitranga amin’ny rafi-pinoantsika iray manontolo raha tsy izany no andraisantsika ny maha-zava-misy marina ny ady lehibe ifanaovan’i Kristy sy i Satana mbamin’ny anjara asantsika ao anatiny?
Tsy zavatra mampisalasala ny olona ny mampiasa ny teny toy ny hoe devoly na anjely, na Andriamanitra mihitsy aza, kanefa zavatra samy hafa tanteraka amin’izay tena hevitr’ireo teny ireo no tiany hambara. Ohatra, misy ireo mampiasa ny teny hoe Andriamanitra noho ny fiasan’izany teny izany fotsiny eo amin’ny fomba fitenin’olombelona sy eo amin’ny fiaraha-monina. Tsy dia mahaliana azy loatra akory anefa raha tena misy marina tokoa izany “Andriamanitra” izany na manao ahoana endrika isehoany na manao ahoana.
Na inona na inona tandindona ampiasain’ny Baiboly hanoritana azy ireo, dia ampianariny kosa fa zava-manan’aina ao anatina ady tena misy tokoa ireo mpandray anjara ireo. Toy izany no fomba ahatakarantsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito azy. Tsy hisy heviny ny ankamaroan’ny foto-pampianarana hodinihina amin’ity telovolana ity raha tsy raisina ara-bakiteny ireo mpandray anjara fantatra ao anatin’io fifanandrinana io. Matetika anefa izany no mampifanohitra antsika tanteraka amin’ny kolontsaina misy.
Na dia efa niseho tamin’ny endrika sy fomba maro samy hafa tokoa aza mantsy ny rafi-pitondrana laika tao anatin’ireo taonjato anankiroa farany, dia tsy misy zavatra hafa mampiseho izany rafitra izany mihoatra noho ny fampirisihana hanaisotra izay fomba fiteny rehetra “tsy ara-panahy” tsy ho eo amin’ny resak’olombelona. Noho ny firoborobon’ny siansa, dia mitady hamaha ny olana amin’ny fomba fijery ara-tsiansa hatrany ny olona sasany izay manana ny kolontsainy avy. Tsy dia mifanaraka loatra amin’ny fomba fihevitry ny siansa mantsy ny resaka anjely sy demonia. Araka izany dia mitady tsy ho hita eo amin’ny kolontsaina amin’izao vaninandro izao intsony ny finoana ny hery hafa ankoatra ny an’olombelona.
Manao ahoana ny fiantraikan’ny fomba fihevitr’izao tontolo izao mirona amin’ny siansa sy ny ara-nofo eo amin’ny kolontsaina misy anao? Ahoana no fomba fiantraikan’izany teo aminao manokana? Inona amin’ireo lafin’io fomba fijerin’izao tontolo izao io no tokony hitandremantsika manokana?